July 2014 | Pyithu Hluttaw
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒသမပုံမှန်အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးရက်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း က နှုတ်ခွန်းဆက် အမှာစကားပြောကြား
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း US-ASEAN Business Council ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယကထံသို့ ပြန်လည်ပေးပို့သော သတင်းမီဒီယာဆိုင်ရာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်သည့် သဝဏ်လွှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း ဖတ်ကြား
Jul 28, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 14, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း ဥပဒေကြမ်းများနှင့်စပ်လျဉ်းသော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး တက်ရောက်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း အား ဂျပန်-မြန်မာ ပါလီမန်ဆိုင်ရာ ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ Hon. Mr. Ichiro AISAWAဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက် ဂါရဝပြု တွေ့ဆုံ
Jul 09, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှမြင့်ဦး ဥရောပ သမဂ္ဂမှ Dr. Hans Born ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ
Jul 04, 2014/
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း သြစတြေးလျ ဓနသဟာ ယ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Hon. Ms. Julie Bishop ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသူရဦးရွှေမန်း မီဒီယာသမားများအား လက်ခံတွေ့ဆုံ